Bāb - Wikipedia
Teraka: 20 Oktobra 1819
Maty: 9 Jolay 1850
I Bāb dia mizaka ny zom-pirenen' i Iràna teraka ny 20 Oktobra 1819 tao Iràna ary maty ny 9 Jolay 1850 tao Tabriz. Izy no mpanorina ny babisma.
Tamin' ny fiantombohan' ireo taona 1790 tao Iràna dia teraka ny fikambanana siita tia zava-miafina sy mihambo ho manam-pifandraisana mivantana amin' Andriamanitra notarihin' i Šayḫ Aḥmad Aḥsāʾī. Ny mpianany, atao hoe shaykhi, dia nanorina ny fampianarany tamin' ny lafiny metafizikan' ny siisma sady nitsikera ny fiankinan' ny mpitondra fivavahana maro anisa tafahoatra amin' ny lalàna.
Nitondra ny anaram-boninahitra hoe Bāb (باب ), izay midika hoe "varavarana" izy (izany hoe varavarana idirana mankany amin' ny fahamarinana), ary notifirin' ny manampahefana tao Iràna ka maty, araka ny faneren' ireo mpitondra fivavahana shiita, enin-taona taty aoriana tao Tabriz.
I Mullā Ḥusayn no mpianatry ny Bāb voalohany. Tao anaty fotoana fohy dia niampy fito ambin' ny folo izany (ka ny iray aminy dia vehivavy atao hoe Tahira). Treraka tamin' izany fotoana izany ny babisma. Ireo mpianatra valo ambin' ny folo volohany ireo no fantatra hatrami' izay ao amin' ny babisma hoe "Taratasin' ilay Velona" na "Soratr' ilay Velona". Ny votoatin' ny hafatry ny Bāb dia ny fahantomotry ny fahatongavan' "Ilay hahariharin' Andriamanitra" (man yuẓhiruh Allāh), ilay nampanantenaina tao amin' ny fanambaràn'i reo fivavahana tany aloha. Isan' ny mpianatry ny Bāb i Bahāʾ-Allāh mpanorina ny finoana bahay ka nanambara ny tenany ho ny fahatanterahan' ny faminanian' ny Bāb.
Ny babisma na finoana baby dia fihetseketsehana ara-pivavahana mpitondra fanitsiana sy milenarista naorin' i Bāb, tao amin' ny tanànan' i Shiraz ao Iràna tamin' ny 23 Mey 1844.
Firehana ara-pivavahana nipoitra avy amin' ny sampana siita, izay manao fampianarana mifanohitra amin' ny finoana silamo be mpanaraka ny babisma. Amin' ny fanambaran' ny Bāb, dia fisehoan' Andriamanitra avokoa ny mpaminany rehetra ary izy tenany dia mitovy amin' i Mohamady. Ny babisma dia niely haingana tao Persia, ka nahatratra hatramin' ny tantsaha farany tsotra ka hatramin' ny manam-pahaizana ambony. Ny mpitondra fivavahana siita niaraka amin' ny governemanta persana dia nanenjika amin-kabibiana ny mpanaraka ny finoana baby. Tsy misy afa-tsy mpianatra vitsivitsy ankehitriny sisa amin' ny mpianatr' i Bāb. Ao Iràna sy ao Ozbekistàna no tena ahitana azy ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bāb&oldid=1001637"
Teraka tamin'ny taona 1819
Maty tamin'ny taona 1850
Voaova farany tamin'ny 22 Febroary 2021 amin'ny 18:58 ity pejy ity.